U-qalmida | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Adiga ama qof aad taqaano ma leedihiin Medicaid iyo Medicare Context link
Si toos ah ma ugu qalantaa Medicaid haddii aad qabto naafonimo? Wax ka ogow Medicaid iyo shuruudaha naafonimo ee Medicaid
Qorshayaasha caafimaadka laba geesoodka ah waxaa loogu talagalay dadka ku jira Medicare iyo Medicaid. Arag inaad buuxiso shuruudaha.
Dulmar guud oo ku saabsan sida ballaarinta Medicaid ay u caawiso bixinta caymiska caafimaadka dadka dakhligooda hooseeyo. Waa tee cida ka faa'iidaysanaysa ballaarinta Medicaid iyo waa maxay daloolka caymiska Medicaid?
Isbarbardhiga Medicaid iyo Medicare: Waa maxay farqiga u dhexeeya labadaan barnaamij ee caymiska caafimaadka dawladda ah? Arag inaad buuxiso shuruudaha.